– पवित्रा चाम्लिङ, खोटाङ
हरपल हार व्यहोर्नु पर्ने, आफन्तले खुट्टा तानेपछि
हाँगाबाट आखिर छुट्टिनु पर्‍यो, पतझर ठानेपछि
तिमी हौ मेरो प्राण भन्दै, तिमी नै जिउ ज्यान भन्दै
छातिमाथि परेड खेलेर गयो, गरिब भन्ने जानेपछि ।।
मुटु नै गाँठो पर्‍यो हजुर, छोराले बचन लाएपछि
निल्नु न ओकल्नु भएँ, एक गाँस भात खाएपछि
सिमल भूवा केस पाक्यो, घरले जा बनले डाक्यो
मनले देख्छ शरीर स्थिर, बुढ्यौली पन आएपछि ।।
आज सोचमा डुबेको छु, विपक्षलाई हार नमिलेपछि
तिनलाई हराउने सही समय, गते र बार नमिलेपछि
सफल हुन कोसिस गरेँ, रफ्तारमा रहेर म कति लडेँ
बिजुली बलेन पल्स र माइनसको, तार नमिलेपछि ।।
सोध्नलाई बाध्य भएँ, एकाएक सन्नटा छाएपछि
रुनलाई विवश बनायो, आँखामा आँसु आएपछि
सुर्यलाई धरामा झार्‍यो, रिसले आफैंलाई मार्‍यो
प्राण त्याग्दा पछुतायो, आवेगमा विष खाएपछि ।।
मर्का बुझ्ने को हुन्छ यहाँ, उल्टो दोष लाउँछ जूनलाई
आखिर पित्तलसँग नै तुलना गर्छन्, मान्छेले सुनलाई
मान्छेले पाप जमाई दिन्छ, मृत्युमा उत्सव मनाई दिन्छ
बैगुनको मात्र चर्चा चलाएर, लुकाउँछ गरेको गुनलाई ।।
– सुरेशकुमार पाण्डे, दाङ (हाल : भारत)
कयौँ घटना कयौँको चित्कारबाट सकियो
स्थानीय चुनाव यस्तो आधारबाट सकियो ।।
छोड्यो कतै ठूला कतै साना घटनाको छाप
उस्तै उस्तै बुजुर्वाको उही सारबाट सकियो ।।
यस्तो छ २०७९ को स्थानीय निर्वाचन साथी
राम्रो होइन हाम्रै पुरानै व्यवहारबाट सकियो ।।
गोली चल्यो कतै बहान ढल्यो बुथ नै कब्जा,
मतदाता खरिदको लगाएर बारबाट सकियो ।।
के आस गर्न सकिन्छ बुजुर्वाको निर्वाचनमा
कसैले खाडी कसैले हेरे कतारबाट सकियो ।।
आउन बाँकी छ अब उही हार जितकै रिजल्ट
निर्वाचन पुरानै बुजुर्वा हथियारबाट सकियो ।।
– युवा बराल ‘अनन्त’, सिक्किम
विगतका यादहरु कहिले काहीँ आलो बनेर आउँछन् । अनर्गल, यसरी धेरै भयो मकैको ढिँडोसँग सिस्नुको झोल मुसेर नखाएको ! कोदोको रोटी, पदिना र रामभेंडाको अचारसँग चोभेर नखाएको ! नयाँ चामलको (जाउलोको) खोले भातमा गहुँको पिठोको डल्ला बनाई उमालेर नखाएको ! बेपारीको पातमा मकैको रोटी पोलेर नखाएको ! ती स्वादहरु अब कल्पना मात्र रहे । सम्झना मात्र । दुधमानेको डाँक्ला ताछेर फर्सीको मुण्टासँग मिसाएर मकैको भातसँग नखाएको झन कति भो कति ! कस्ता यादहरु ।
तिर्खा जस्तो अनुभूति ! एउटा अतृप्त तृष्णा । चाहेर पनि खान नमिल्ने स्थिति छ आजकल । त्यसको प्राप्ति अनुकुल छैन अब । असम्भव । चलन नै छैन । अप्राप्य । भनौं मासिइएको । बिर्सिइएको । या छोडिइएको एउटा पुरानो सभ्यता । ठुलो छलाङ्ग लिएको छ समयले । मेरै समयमा मेरै उमेरको आयतनभित्र पनि यत्रो परिवर्तन !
धेरै भयो हो ‘खानेतेलको रित्तो बोतल बोकी छिमेकी घरहरुमा एक औंली तेल पैँचो नमागेको । बिहानी उठ्दा एक सिन्का माचिसको अभावले तल्लो घर माथिल्लो घरबाट झरिलो अगुल्ठोको आगो नल्याएको । घरमा पाहुना आउँदा एउटा बर्को ओडी परालको माचमा रात नकाटेको झन वर्षौं बित्यो । अनि पानी झरी पर्दा भएभरको भाँडा वर्तनहरु भेला पारी खरले छाएको छानाबाट चुहुन पुगेको प्रत्येक तप्कनाहरुमा यत्रतत्र थाप्न नपरेको अनि भाँडा नथापिएको ठाँउको पानी सोहोरेर झुम्रोमा निचोर्दै फाल्न नपरेको धेरै धेरै भयो ।
ओहो झण्डै बिर्सिएछु, वैशाखको तेजिलो हावाको निर्मम प्रहारले क्षतविक्षत घरको धुरीमा खरलाई चेप्ने बाँसको भाटालाई चोयाले कस्सेर नबाँधेको पनि वर्षौं बित्यो । घर लडन लाग्दा तलतिरबाट अर्को नयाँ दह्रो बाँसको टेवा लाएको सम्झँदैछु यतिबेला । ती कस्ता अनुभवहरु थिए !
सुख बिर्सन्छन् रे मान्छेले छोट्टो । तर, दुःख पनि बिर्सिइँदो छ यति छिटै ! भने पछि, स्थायित्व के’मा छ र !
आमाको पोल्टाबाट निकै यत्नले साँचो चोरी ठूलो काठको बाकसबाट घीउ चिनी अनि मह चोरेर खाएको आलो याद छ । कस्तो अतृप्त भो हुन ती ! ती बालसुलभ खेल क्रिडाहरु गर्न नमिल्ने खल्लोपन छ यहाँ यतिबेला । साँच्चै !
आहा ! त्यो आलो गोबर माटोले लिपेको घरको चुल्हाको गन्ध सुँघ्ने इच्छा लागेको महिनौं भयो । यो चिसो सिमेण्टले बनेको घरमा त्यो गन्ध कहाँ छ र ! बल्न नमानेको चिसो दाउराको पिरो धुवाँमा रुमलिन मन परेको पनि धेरै भयो । अगेनाको डिलमा बसेर आमैको मुखार्वृन्दबाट दन्तेकथा सुनिन्थ्यो । आमै हुनुहुन्न अब । अनि अगेना पनि । दाउरा पनि बल्दैन यो घरमा । आगो अरु नै प्रक्रियाले बल्छ । भात पनि अर्कै प्रयोजनले पाक्छ ।
गमलाको कम्पोज मल अञ्जुलीभरी उठाएर सुँघें तर आएन खोजेको माटोको त्यो सुगन्ध । तिख्खर । अलकत्रे सडकको छेउभित्ता कोट्याएर खोजेँ त्यो वास्तविक माटो । आफ्नो माटो । आफ्नो तिर्जा । निजी ।
तर, असारे हिलो खेतमा जिउभरी लछेप्रै हिलो नलागेको कति भो कति । दाँतेमाथि चडेर हाहाहोहो नकराएको‘ हाँसी रमाइलो नगरेको युग जस्तै पुरानो भो ।
कतै माटोको पनि तिर्खा लाग्छ ? तर मलाई अनौठो प्रकारले माटोको तिर्खा लागिरहेछ । ठाँउको । अस्तित्वको । जमीनको । स्वामित्वको । अधिकारको । स्वतन्त्रताको । स्वच्छन्दताको ।
घर मालिकको अग्लो बिल्डिङ्गको टुप्पामा चढेर जोडसित चिच्च्याउँ चिच्च्याउँ लाग्दैछ यतिबेला । भित्र कतै अल्झेको बोझ हो कि कुण्ठा हो कि वेदना हो कि पीडा । यस्तै के के’को वान्ता एकैसाथ ओकलौं ओकलौं लागिरहेछ । पोखौं पोखौं लाग्दैछ यो गह्रौं अट्टहास !
ठूलो, खुल्ला र सम्पूर्ण आकाश नदेख्नुको यो ऐंठन । आफ्नो नहुनुको आभासको अर्को तीब्र पराकम्पन । जति सम्झँदैछु उति लाम लागेर आउँदैछन् ती प्यारा प्यारा मीठा मीठा सम्झनाहरु । म थिएँ’को । मेरो थियो’को। मेरो धरातलको । मेरो शैशवको । आफ्नोपनको । जहाँ टेकेर म पहिलो पल्ट उभिएँ । जुन माटोको कोमल स्पर्श अनि उपयुक्त शिक्षाले म मान्छे बनेँ । सम्झिरहेछु‘ यतिबेला ती सबै सबै । जान्दै बुझ्दै जाँदा; आफुबाट खोसिँदै गएका आफ्नापनहरू ! आफुले अधिकार जमाउन नसकेका निर्धापनहरू । बिडम्बनाहरू ! सम्झिरहेछु– ती सबै सबै माझ तिमीलाई पनि ! सुन्न चाहन्छु म तिम्रो पनि कथा । भनन्– तिमी कुन माटोले मान्छे बनिएकी हौ ?
म एउटा अभीशप्त भोट
– डा . मुरारि पराजुली
म एउटा निरीह भोट
बडो बिलखबन्दमा छु
कि तस्करी र भ्रष्टाचारका प्रतापले आर्जित
दुई चोक्टा मासु र रक्सीमा बेचिन सक्छु
वा श्रीमतीलाई पठाइएको
र एक पाथी चामलमा साटिन सक्छु ।।
कसलाई के थाहा
भोलि हुने चुनावमा
आजै वेपत्ता मातेर
मतपेटिकामा पुग्नै नसकेर
खस्नैबाट वञ्चित हुन सक्छु
जमिन्दारका हवेली अगिको आँगनमा
तामेल गरिएको आदेशबमोजिम
उसैले भनेको चुनाव चिह्नमा
चुपचाप चुपचाप खसिन सक्छु ।।
वा मालिक साप्को सुपुत्र
जतिसुकै तस्कर र व्यभिचारी भए पनि
जतिसुकै अभिमानी र पातकी भए पनि
उसका बर्खिलापमा भोट हाल्नेले
सखारै गाउँ छाडेर
मुग्लानिनु पर्छ भन्ने त्रासका मारे
उसैका चुनावचिह्नमा घोप्टिन सक्छु ।।
म एउटा निःसहाय भोट न हुँ
मेरा नामको भाट खसालिसकेकाले
कुनै विरोध र हंगामा नगरी
बडो शालीनतापूर्वक घर फर्काइन सक्छु
वा मतदानस्थलमा छिर्नै नपाइने
कृत्रिम भिडलाई छिचोल्ने ह्याउ नभएर
वा लडाइँ हुनसक्छ ।।
या गोली चल्न सक्छ भन्ने
मुस्तन्डहरूका हल्ला सुनेर
शान्तिपूर्वक बीच बाटैबाट
निरुपाय लखेटिन सक्छु ।।
जीवनभर एउटा आस्थाको टुकी निभ्न नदिएर
अन्तर्हृदयले प्रेम गरिराखेको
अमूक कुनै चुनाव चिह्न पल्तिर
हठात् गठबन्धनको केन्द्रीय आज्ञाप्तिले
जीवनभर मलाई दुस्मन ठानेको पार्टीका नाउँमा
बलजफ्ती खसाइन सक्छु ।।
म यौटा निमुखा भोट
कसले भन्न सक्छ
आजै रौतहटको कुनै गाउँभित्र
बम विस्फोटनमा परी
भोलीको सूर्योदय नहेर्दै
भोट खसाउने अभीप्सा सकिएर
इटाभट्टीको अग्निमा डढाइन सक्छु ।।
वा भरतपुरको कुनै मतगणनास्थलमा
भोटका रूपमा खसेर पनि
गन्ती हुँदाहुँदै चपाइएर
अभीशप्त भोट हुन सक्छु
किनभने संसद् वादको सौन्दर्य नै यही हो
निर्मूल्य मेरो भोटको कुन तुजुक छ र
जुनसुकै हत्कण्डाले पनि
फगत चुनाव जित्ने न हो ।।
–जानुका गुरागाईं, झापा
श्रमको ऊ गर्छ शोषण मुखले उदार हुन्छ
ज्याला दिँदैन मेरो निद्रा फरार हुन्छ ।।
मिल्दैन दाल, चामल दोकान हो किराना
बुझ्दै छु भित्रभित्रै मदिरा बेपार हुन्छ ।।
बोकेर थाल रित्तो बस्दै छ ऊ सडकमा
बुझ्दैन आज आश्वासनको बजार हुन्छ ।।
बुझ्नै सकिन्न भित्री मनको कुरो कसैको
बोली छ मीठो खुब बगलीमा कटार हुन्छ ।।
सुन्दैन आज मान्छे राम्रा कुरा कसैका
गल्ती कुराको मात्रै औधी प्रचार हुन्छ ।।
– रुक्मिणी शर्मा, उदालगुडी, असम
पुर्णप्रसादले शहर गएका बेला एकजोडी सुँगा लिएर आए । उनले सोचेका थिए, ‘सुगा बोल्न थाल्छन् अनि छोरी यिनीहरूसँग खेलेर भुल्छिन् ।’ तर, उनलाई के थाहा, छोरीको मनले के माग्दै छ ? कहाँ उड्दै छ ? आफुले सोचे जस्तो सबै केको हुन्थियो र ..। ‘उ’ आजभोलि आडम्बर, विलासितापुर्ण जीवनमा होमिएका छन् । मुन्नीलाई पनि आफु जस्तै बनाउन खोज्दछन् । तर मुन्नीको मन बाबुको आडम्बर तिर ढल्किदै न । मुन्नीको मन मुटु त टुल्कि, लक्ष्मी, ऋषि भगे तिर ढल्किएको छ किनभने उ स्वतन्त्र भावले उडन् खोज्दछिन् । बाबुलाई फेरि छरछिमेकमा भएका तेस्ता दरिद्रताले त्यान्द्रो भाका, मैलेधैले नानीबाबुहरुसँग खेलेको मन पर्दैन । तर मुन्नीको चैँ साथीहरूसँग खेल्न नपाएर मन खिन्न हुँदै गाको छ । साथीहरूले खेलेको देख्दा उनका आँखादेखि आँसुका बलिन्द्र धारा बग्छन् । कहिलेकाँही त बाबु आमाका आँखा छलेर “जे होला देखा जाला” भन्ठानेर ढोका सरक्क खोलेर खेल्न जान्छिन् । त्योदिन चैँ उनको लागि कुनै एउटा ठूलो युद्ध जितेर आएपछि राज्यमा राज्याभिषेकको लागि उत्सव मनाएको दिन जस्तो लाग्दथ्यो । मन प्रफुल्लित हुन्थ्यो । फेरि कुनै दिन चै निस्किने जमर्को गर्दागर्दै मौका मिल्दैनथ्यो र सुर्यदेवको विश्राम लिने बेला हुन्थ्यो । त्यतिबेला बिचरी मुन्नी सुगासँग बसेर मनको गुनासो पोख्दै भन्थिन्, ‘हेर...तिमीहरुको र मेरो दसा एउटै भाको छ । हामी तिनैजना पिञ्जरामा बाँधिएका पराधीन प्राणी हौँ । पर्ख पर्ख तिमीहरुले चिन्ता गर्नुपर्दैन । म यहाँबाट तिमीहरुलाई छिट्टै नै मुक्त गराउँनेछु ।” सुगा दुईवटा अलि अलि बोल्न थालेका छन् । उनीहरू मुन्नी–मुन्नी, हुन्छ–हुन्छ भन्दै रमाउछन् ।
आइतबारको दिन थियो । मुन्नीको पनि पाठशाला छुट्टी भाको हुनाले घरमै थिइन । दैव संयोग त्यो दिन बाबु–आमा दुवै व्यवसायको निम्ति शहर जानुपर्ने भयो । बाबु आमा गए पछि मुन्नी पिञ्जराको छेउमा गएर मिठु मिठु भनेर बोलाउँछिन् । उनीहरू मुन्नीको छेउमा आएर केही भनौँला जस्तो गर्छन् । मुन्नी आफ्नो हातले चारो पानी खुवाछिन् अनि सुमसुम्याउदै भन्छिन्, ‘तिमीहरु आजदेखि आजाद पन्छी हुनेछौँ । लौत् जाओ मुक्त मनले दिग दिगन्तÞर्को परिभ्रमण गरेर साथी सँगी सित स्वतन्त्र भएर खेल भन्दै ढोका खोलि दिन्छन् । जब सुगा पखेटा फरफराउँदै खुशी खुशीले वनतिर लागे । उनि एकहोरो आँखा झिमिक्क नपारि उतैतिर हेरि रहेकी हुन्छिन् ।
त्यतिकैमा बाबु–आमा शहरबाट आईपुग्छन् । छोरी एकोहोरिएर बसेको देखेर उनीहरू आत्तिदै के भयो भनेर छोरीलाई सोध्छन् । छोरी खाली पिञ्जरा देखाउँदै “म पनि एक दिन मेरो पिञ्जराको ढोका खोलेर लक्ष्मी, टुल्किहरुसँग कसैले चालै नपाई खेल्न जान्छु”, भन्छिन् । बाबु–आमा छोरी तिर ट्वाल्ल परेर हेरिरहन्छन् । छोरी कुद्दै घरभित्र पस्छिन् । भोलिपल्ट चैते दशैंको महानवमी थियो । उनीहरूले त्यहीँ बसिबसी सिद्धान्त लिए भोलि राम्रो दिन हो लक्ष्मी, टुल्कÞी उनीहरुका अरु साथीलाईपनि निम्त्याउने, नयाँ कपडा ल्याई दिने, अनि मीठो मिठो खानेकुरा खुवाएर मुन्नीसहित शहर डुलाउन लिएर जाने ।
कविता : अनि पो जितिन्छ लडाईँ
– वि. पि. विद्रोही
जहाज चढेर पूर्व लाग्यो कि
बस चडेर पश्चिम लाग्यो
दलाल पुँजीवाद ?
उस्ले कस्तो कमिज लगाएको छ ?
अन्दाजी कति वर्षको छ ?
जुङ्गा मोटो छ कि पातलो ?
कति बजे कुन चोकमा पुग्छ ?
एउटा कमरेडले अर्को कमरेडलाई खबर गरौँ
हामीमाथी लाद्ने अत्याचारको यात्री बोकेर
साढे पाँच गिएरमा हुँइकिरहेको
दलाल सत्ताको गाडिलाई
सुनसान जंगलमा रोकेर
बुझाइदिऊँ जनसेनाको डिभिजनलाई
अनि पो जितिन्छ लडाइँ ।।
क्रान्तिकारीहरुको विरुद्ध कस्तो खाले लेख्दैछ
चियो त्यता गरौँ
हिन्द–प्रसान्त सागर भएर
हाम्रो माटोमा छिर्न चाहिरहेको साम्राज्यवादलाई
कोलकाता बन्दरगाहमै रोकौँ
समुन्द्रमा एम्बुस थापौँ
विश्व शान्तिको खोल ओडेर
झ्यालबाट छिर्न लागेको धार्मिक अतिवादलाई
भण्टा बारिबाटै फर्काइदिउ
अनि पो जितिन्छ लडाईँ ।।
एउटा कमरेडले अर्को कमरेडको जरो खनेर
अर्को कमरेडले अर्को कमरेडको हाँगो लाछेर
कसरि जितिन्छ लडाईं ?
पल्मनरी धमनी र सिरा हुँदै
हाम्रो मस्तिष्कसम्म पुग्न चाहिरहेको पुँजीवादलाई
नाकको डाँडिमै रोकौँ
पुँजीवाद हाम्रो आँगनमा नाङ्गै नाचिरहेको याम
हाम्रो काम धेरै छ
पुँजीवादविरुद्ध लडौँ ।।
– सुरेश वैद्य, काठमाडौं
प्रिय, मलाई हेरेर तिमी के हाँसेकी थियौ मुसुक्क
धर्तिमा छु कि स्वर्गमा छु बिर्सेछु मैले त भुसुक्क ।।
चाँदी झै दन्त लहर देखाएर हाँस्दा कत्ति हिस्सि परेकी
दिन पनि रात झै लाग्छ जब बस्छौ तिमी रिसाइ ठुसुक्क ।।
जहाँ–जहाँ नजर पुर्‍याए देख्छु बहारै बहार छाएको
यस्तो रंगिन मौसममा आउछौं कि माया गर्न खुसुक्क ।।
मेरो जस्तो तिम्रो पनि गुड्गुडि लाग्यो कि तन मनमा
मनका कुरा साट्न आउँछौ कि भेट्न राति लुसुक्क ।।
छट्पटिमै मेरा रात बित्यो उनको मिठो पर्खाइमा
थाहा नै भएन कुन बेला छोएर गए सपनीमा छुसुक्क ।।